Col: C/llaahi Maxamed Xassan (Farey) oo caawa salaadii maqrib kaddib lagu dilay Gaalkacyo. – Radio Daljir
Col: C/llaahi Maxamed Xassan (Farey) oo caawa salaadii maqrib kaddib lagu dilay Gaalkacyo.
Luulyo 30, 2012 10:15 b 0
Gaalkacyo, july, 30 – Allaha u naraxiistee waxaa caawa salaadii maqrib kaddib magaalada Gaalkacyo lagu dilay marxuun Col: C/llaahi Xassan Faray oo ka mid ahaa indheer-garadka magaalada Gaalkacyo.
Wararka idaacadda Daljir ay ka helayso Gaalkacyo ayaa ku waramaya in marxuunka lagu dilay xaafada Israac,? xilli uu salaadii maqrib kusoo tukaday masjid aan sidaasi ufa fogayn gurigiisa, waxaana isla goobtaasi lagu dhaawacay mid ka mid ah caa’iladiisa oo la socday maruxuunka markii ay dhagar-qabayaashu dilka u gaysanayeen.
Dad goob-joogayaal ah ayaa ku waramaya sidii caadada Gaalkacyo u ahayd inay goobta isla xilligiiba ka baxsadeen dhagar-qabayaashii dilka u gaystay marxuun Col: C/llaahi faray, waxayna ku hubaysnaayeen bistoolado sida wararku tilmaamayaan.
Allaha u naxariistee C/llaahi Faray ayaa hadda ka mid ahaa masuuliyiinta xarunta nabadda iyo wacyigalinta Gaalkacyo oo ah xarun dhalinyarada lagu baro xirfadaha gacanta, waxaana sanadii lasoo dhaafay uu marxuunku madax u ahaa guddiga amniga ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo.
Dilkan ayaa ku soo aaday xili uu ka soo raynayay amniga magaalada Gaalkacyo baryihii ugu danbeeyay inkastoo dhawaan qarax lala eegtay Taliyaha ciidanka CID Mudug G/dhexe Warsame Yuusuf Axmed
C/risaaq Cali Silfar.
Dhul-beereed ku yaalay Karin oo dab-xoogani qabsaday. iyo qaylo-dhaan gurmad oo waxgaradka tuuladaasi kasoo yeeraya.
Kulan ku aaddan adkaynta amniga Puntland oo maanta ka dhacay Garowe.